Kwenziwa yini yi-SKM - Dongguan Sunkia Machinery Co., Ltd.
Izinsizakalo zobuchwepheshe zizokwenziwa kuzo zonke izici, kusuka kwinqubo yangaphambi kokuthengisa kuya kwinqubo yangemva kokuthengisa. Ngokuya ngezici ezihlukile zamakhasimende nokulindelwe, sikunikeza iziphakamiso namasevisi enziwe ngokwezifiso.
Ochwepheshe banganikela ngokuqeqeshwa okuhlukile lapho senza khona, noma ngqo ezikhungweni zamakhasimende. Siqinisekisa ukuthi abasebenzi bakho bayayiqonda kahle imishini ye-SKM ukuqinisekisa ukusebenza kwakho kahle nokukhiqiza.
Sikhulumela izikhungo zakho. Ngazo zonke izilinganiso ezinemininingwane nokuhlolwa, sikwazisa ngakho konke ukuthuthuka, ukulungiswa nokulungiswa kwezidingo zakho. Futhi ngokunakekelwa kwethu, sibikezela zonke izinkinga ezingaba khona, sisize umshini wakho usebenze kahle ngesikhathi sokuphumula esincane.
I-SKM inesitoreji sayo sezingxenye zokungcebeleka esihleleke kahle, zonke izingxenye zikulungele ngokuphelele futhi zilungele ukuthunyelwa kunoma yikuphi emhlabeni. Siqinisekisa isikhathi sokulethwa esifushane kanye nekhwalithi engcono kakhulu. Imiyalo yoMhlangano izothunyelwa kanye nezingxenye zethu zokungcebeleka.
Ukuze unikeze amakhasimende ethu imikhiqizo esebenza kahle kakhulu, i-SKM ayeki ukusebenza ekuvuseleleni nasekuthuthukiseni imikhiqizo yethu. Ngolwazi olungaphezulu kweminyaka eyi-12 enkundleni, singongoti bokuthuthukisa izakhiwo zakho zemisebenzi yakho ethize.